PerfectFit inoshandura zvekare maapplication kugadziriswa kweiyo iPhone | IPhone nhau
PerfectFit inogadzirisa saizi yekare maapplication kugadziriso kweiyo iPhone
Zvekare isu tinotaura nezve nyowani tweak, iyo isingaenzane neyapfuura iyo inotibvumidza isu kugadzirisa iyo mushandisi interface kana kuigadzirisa, PerfectFit inotibvumidza kugadzirisa saizi yeemaapps kuti vagone kuchinjika nekugadziriswa kwezvikwiriso yeiyo chero iPhone modhi. Kunyangwe paine kuedza kwakasiyana kweApple kuita kuti vagadziri vagadzirise mashandisiro avo, kamwe chete uye zvese, kumasikirini emamodeli ane mahwindo akakurisa kupfuura maPhones ekutanga, vazhinji ndivo vanogadzira vanoramba vachiregeredza chikumbiro ichi. Izvo zvakatokonzera kubviswa yenhamba yakakura yekushandisa.
Muzviitiko zvakawanda, kunyanya kana tichitaura nezvechinyakare zvinoshandiswa, akagadziriswa kugadziriswa kwe iPhone 4s kana apfuura, iyo inotiratidza dzimwe nzvimbo dema kumusoro uye pasi pechiso, ichipa chinonzwisa tsitsi. Zvinoshungurudza kuti Apple inoramba ichibvumidza aya marudzi ekushandisa, mashandisiro ayo anotipa isu mushandisi interface isina kuchinjika kugadziriswa kweiyo iPhone mamodheru ane yakakwira skrini resolution. Asi nekuda kwePerfectFit uye sezvatinogona kuona mumufananidzo uyo musoro wechinyorwa ichi, saizi yekushandisa inoenderana zvakakwana kugadzirisa kwescreen.
PerfectFit haina chero chinhu chitsva icho chisina kumboitwa kare isu tinogona kuita neFullForce ye iPhone, Ryan Petrich tweak, asi kusiyana neiyo yekupedzisira PerfectFit inoenderana neIOS 10 uye yazvino iPhone mamodheru. Kana tangoisa iyi tweak, isu tichafanirwa kuenda mukati mekushandisa masystem kuti tikwanise kumisikidza kushanda kweiyi tweak mumashandisirwo asina kugadzirirwa hombe saizi saizi. PerfectFit inowanikwa yemahara kurodha pasi kuburikidza neBigBoss repo
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 10 » PerfectFit inogadzirisa saizi yekare maapplication kugadziriso kweiyo iPhone
Alto's Adventure yakaderedzwa uye yekutanga kuravira kweAlto's Odyssey
WhatsApp inozivisa zviri pamutemo kuvhurwa kweiyo nyowani States chimiro